त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले बनाएका २० कीर्तिमान | Hamro Khelkud
त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले बनाएका २० कीर्तिमान
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सबीच त्रिकोणात्मक टि२० आई सिरिज टियु मैदानमा शनिवार सम्पन्न भएको छ । डबल राउन्ड रोविन लिग हुँदै फाइनलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई १ सय ४२ रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै घरेलु मैदानमा ११ वर्षपछि उपाधि जितेको थियो । ब्याटिङ नेपालको इतिहास देखिनै कमजोर मानिन्छ । तर त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन ब्याटिङमै गर्यो ।
पहिला ब्याटिङ गरेको तीनै खेलमा २ सय माथिको योगफल बनाउँदा लक्ष्य पछ्याउँदा सुरुवाती दुई खेलमा ९–९ विकेटको सानदार जित निकालेको थियो । यसले नेपाली क्रिकेट टोलीको ब्याटिङमा स्तरमा सुधारको संकेत दिएको छ । सानदार ब्याटिङ गर्दा नेपालले थुप्रै कीर्तिमान बनायो ।
बलिङमा भन्दा नेपाललका कीर्तिमान ब्याटिङमा बढी रहे । २० मध्य १८ कीर्तिमान ब्याटिङका छन् । ४ विश्व कीर्तिमान बन्दा राष्ट्रिय कीर्तिमान थुप्रै रहे । त्यसमध्यका त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले बनाएका २० कीर्तिमान यस प्रकार छन् ।
१.कुशलको लगातार तीन अर्धशतक
युवा ओपनर कुशल भुर्तेलले डेब्यू गर्दै यस सिरिजमा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध डेब्यू गरेका कुशलले पहिलो खेलमै ६२ रन बनाएका थिए । दोस्रो खेलमा मलेसियासँग ६१ र तेस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग ६२ रन बनाएपछि कुशल टि२० आईमा सुरुवाती तीनै खेलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्वकै पहिलो खेलाडी बने ।
यसअघि टि२० आई करिअरको सुरुवाती दुई खेलमा इंग्ल्यान्ड तथा वर्तमान समयका टि२० वरियताका शीर्षस्थानका ब्याट्सम्यान डेविड मलानले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए ।
२. कुशल मल्लको कम उमेरमा अर्धशतक
युवा ब्याट्सम्यान कुशल मल्लले फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध २४ बलमा ५० रन बनाएका थिए । उक्त अर्धशतक कुशलले १७ वर्ष ५० दिनको उमेरमा पूरा गरेका थिए । जुन टि२० आईमा सबैभन्दा कम उमेरमा बनेको अर्धशतक हो । यसअघि उक्त विश्व कीर्तिमान युगान्डाका ब्याट्सम्यान फ्रान्क अक्कांवासाले कतारविरुद्ध १७ वर्ष ५२ दिनमा ६६ रनको इनिङ खेलेका थिए ।
३. आसिफ र कुशलको ऐतिहासिक साझेदारी
कुशल भुर्तेल र आसिफले पहिलो खेलमै नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध १ सय १६ रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए । उक्त खेल दुबै खेलाडीको टि२० आईमा डेब्यू थियो । विश्व टि२० इतिहासमै पहिलो पटक डेब्यू खेलाडीले शतकीय साझेदारी गरेका हुन् । यसअघि डेब्यू खेलाडीको २०१९ मा मोजाम्बिकबाट छैटौं विकेटका मलावीविरुद्ध डामिसो कुवानो र फिलिप कोसाले ९० रनको साझेदारी गरेका थिए ।
४.लगातार शतकीय साझेदारी
कुशल भुर्तेल र आसिफले लगातार दुई खेलमा शतकीय साझेदारी गरे । पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध उत्कृष्ट साझेदारी गरेका आसिफ र कुशलले उक्त लयलाई निरन्तरता दिँदै मलेसियाविरुद्ध १ सय २ रनको साझेदारी गरे । त्योसँगै विश्व टि२० आई क्रिकेटमा लगातार दुई खेलमा दुई शतकीय साझेदारी गर्ने विश्वका पहिलो जोडी बन्न सफल भए ।
यसअघि सन् २०१० केन्या ओपनर डेविड ओबुया र स्टिभ टिकलोले स्कटल्यान्ड र युगान्डासँगको खेलमा ओपनिङ गर्दै दुई शतकीय साझेदारी गरेका थिए । स्कटल्यान्डविरुद्ध १ सय १० र १ सय २६ रनको दुई शतकीय साझेदारी गरेका थिए । तर ती खेल लगातार भने थिएन । स्टिभले यी दुई खेलबीच भएको युगान्डाविरुद्धको एक खेलेका थिएनन् । समग्रमा स्टिभ र ओबुयाले गरेको साझेदारीमा भने दुवै खेलमा शतकीय साझेदारी नै थियो ।
५.सर्वाधिक ठूलो योगफल
फाइनलमा नेपालले २ सय ३८ रन बनायो । जुन नेपालले टि२० इतिहासकै बनाएको सर्वाधिक योगफल हो । यसअघि टि२० मा सिंगापुरविरुद्ध २ सय १० र टि२० आईमा भुटानविरुद्ध २ सय ३६ रन थियो ।
६. सर्वाधिक रन अन्तरको जित
नेपालले फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई १ सय ४२ रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो । जुन रन अन्तरले सर्वाधिक ठूलो जितमा पर्दछ । त्यसअघि भुटानविरुद्ध १ सय ४१ रनको जित थियो ।
७. अर्धशतक विनानै २ सय रन
नेपालले मलेसियासँग लिगको अन्तिम खेलमा २ सय १७ रन बनाएको थियो । तर कुनै पनि ब्याट्सम्यानले अर्धशतक बनाउन सकेनन् । उक्त खेलमा नेपालबाट सर्वाधिक रन करण केसीले ४५ रन बनाएका थिए । त्यसअघि नेपालले २ पटक दुई सय रन माथिको योगफल बनाएको थियो ।
भुटानविरुद्ध ज्ञानेन्द्र मल्लले शतक र पारस खड्काले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध यसै सिरिजमा २ सय ६ रन बनाउनेक्रममा कुशल भुर्तेल र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले अर्धशतक बनाएका थिए । नेपालले अर्धशतक विनानै २ सय रन पहिलो पटक बनाएको थियो ।
८. पहिलो त्रिकोणात्मक उपाधि
नेपालले पहिलो पटक त्रिकोणात्मक उपाधि जितेको हो । टि२० आईमा फाइनल खेल्दै जितेको यो पहिलो उपाधि हो । यस अघि नेपालले टि२० सिरिज उपाधि भने जितेको थियो ।
९. उच्च ओपनिङ साझेदारी
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध आसिफ र कुशलले १ सय १६ रनको साझेदारी गरेका थिए । जुन नेपालका लागि टि२० आईमा बनेको सर्वाधिक ओपनिङ साझेदारी हो । यसअघि भुटानविरुद्ध ओपनिङ गर्दै सागमा पारस र ज्ञानेन्द्रले १ सय ८ रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए ।
यसअघि पारस र आरिफ शेखले २०१९ मा सिंगापुरविरुद्ध दोस्रो विकेटका लागि १ सय ४५ रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए ।
१०. लगातार शतकीय साझेदारी
लगातार दुई शतकीय साझेदारी गर्ने आसिफ र कुशल पहिलो नेपालबाट पहिलो जोडी बने । ओपनिङ गर्दै नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाविरुद्ध लगातार शतकीय साझेदारी गरेका थिए ।
११. एकै खेलमा सर्वाधिक छक्का
मलेसियाविरुद्ध २ सय १७ रन बनाउनेक्रममा नेपालका ब्याट्सम्यानले कुल १९ छक्का हानेका थिए । जुन एकै खेलमा नेपालले प्रहार गरेको सर्वाधिक छक्का हो । विश्वकै टि२० खेलमा सर्वाधिक छक्का अफगानिस्तान आयरल्यान्डविरुद्ध २२ प्रहार गरेको छ । स्कटल्यान्ड्सले २०, नेदरल्यान्ड्स १९, वेस्टइन्डिज, भारत र अष्ट्रेलियाले २०–२० छक्का प्रहार गरेका छन् ।
१२. एकै सिरिजमा सर्वाधिक विकेट
त्रिकोणात्मक सिरिजमा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले कुल १३ विकेट लिए । जुन नेपालबाट एकै सिरिजमा कुनैपनि बलरले लिएको सर्वाधिक विकेट हो । यसअघि करण केसीले २०१९ मा ओमानमा पाँच राष्ट्र सहभागि सिरिजमा ११ विकेट लिएका थिए ।
१३. एकै सिरिजमा सर्वाधिक रन
कुशल भुर्तेल नेपालबाट एकै सिरिजमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन् । कुशल भुर्तेलले ५ खेलमा ४ मा अर्धशतक सहित कुल २ सय ७८ रन बनाए । आसिफ शेख ५ खेलमा १ सय ५४ रन बनाए । यसअघि नेपालबाट एकै सिरिज वा प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान ज्ञानेन्द्र मल्लको नाममा थियो । मल्लले १३ औं सागमा ३ खेलमा १ सय ४८ रन बनाएका थिए ।
१४. लगातार तीन दोहोरो शतकको योगफल
नेपालले टि२० आई क्रिकेटमा लगातार तीन पटक दोहोरो शतकको योगफल तयार पारेको पहिलो पटक हो ।
१५. सर्वाधिक स्ट्राइकरेट
करणले मलेसियाविरुद्ध १३ बलमा ७ छक्का सहित ४५ रन जोडेका थिए । करणको स्ट्राइकरेट ३ सय ४६.१५ थियो । जुन नेपालबाट एकै खेलमा ब्याट्सम्यानले बनाएको सर्वाधिक स्ट्राइकरेट थियो । यसअघि पवन सरार्फले गत वर्ष थाईल्यान्डविरुद्ध २ सय ७० को स्ट्राइक रेटमा २७ रन जोडेका थिए ।
१६. सर्वाधिक औसत रन
कुशल भुर्तेलको यस सिरिजमा औसत रन ६९.५० रह्यो । जुन नेपाली ब्याट्सम्यानको सर्वाधिक औसत रन हो । आसिफ शेखको ३८.५०, कुशल मल्लको २९.८० र पारस खड्को २७.५५ को औसत रन छ ।
१७ .सर्वाधिक योगफल बचाउन नसक्नु
नेपालको नाममा यस सिरिजमा एउटा नराम्रो कीर्तिमान बन्यो । नेपालले नेदरल्यान्ड्सँग २ सय ६ रन बनाएपनि ३ विकेटले पराजित हुन पुगेको थियो । नेपाल पहिलो पटक २ सय भन्दामाथि रन बनाएर पनि पराजित हुन पुगेको हो ।
१८. सन्दीप एक सय खेल
यसै सिरिजमा सन्दीपले मलेसियाविरुद्ध लिग चरणको अन्तिम खेल खेलेसँगै टि२० क्रिकेटमा एक सय खेल खेले । सन्दीप नेपालबाट टि२० क्रिकेटमा एक सय खेल खेल्ने पहिलो खेलाडी बने ।
१९. एकै सिरिजमा सर्वाधिक अर्धशतक
कुशलले एकै सिरिजमा ४ अर्धशतक प्रहार गरे । जुन नेपालबाट एकै सिरिजमा पहिलो पटक चार अर्धशतक बनेको हो । अर्धशतक बनाउने सर्वाधिक दोस्रो खेलाडी हुन् । सर्वाधिक अर्धशतक पारस खड्काको नाममा छ । पारसले ५ अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।
२०. एकै मैदानमा सर्वाधिक रन
कुशल भुर्तेल टियु मैदानमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन् । टि२० आईमा कुशल भुर्तेल पछि टियुमा ज्ञानेन्द्र मल्लले ८ खेलको ७ इनिङमा ब्याटिङ गर्दै २ सय ५५ रन बनाएका छन्